ဘယ်သူတွေက 2020 ရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိန်းကလေး Kpop Idol တွေလဲ… ? | News Bar Myanmar
ဘယ်သူတွေက 2020 ရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိန်းကလေး Kpop Idol တွေလဲ… ?
ကိုရီးယားမှာ ဇာတ်ကားတစ်ကား ကြော်ငြာတစ်ခုရိုက်ရင် အနုပညာကြေးအများကြီးရတယ်ဆိုတာ အားလုံးပဲ သိကြမှာပါ။ အခုကတော့ ကိုရီးယားမှာအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးအနုပညာရှင် ၁၀ ယောက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
နံပါတ် ၁၀ နေရာမှာတော့ Blackpink အဖွဲ့ဝင် Jennie က သူမရဲ့ကြွယ်ဝမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
နံပါတ် ၉ မှာလည်း Blackpink အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lisa ကနေရာယူထားပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းခွဲရှိတဲ့သူမဟာ Moonshot, Adidas, Penshoppe စတဲ့ brand တွေမှာ တစ်ယောက်တည်းရော အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရော ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။
နံပါတ် ၈ ကတော့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Soo Young ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဆီမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီး သူမရဲ့ Cadillac SUV XT5 ကားကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သောင်းခန့်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
နံပါတ် ၇ မှာတော့ 2NE1 အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ CL ကရပ်တည်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းဖြစ်ပြီး Adidas, LV, Chanel စတဲ့ brand တွေနဲ့လည်းအလုပ်တွဲလုပ် နေပါတယ်။
နံပါတ် ၆ မှာတော့ Miss A အဖွဲ့ဝင် Suzy ကနေရာယူထားပါတယ်။ သူမရဲ့ ကြွယ်ဝမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သိန်းခွဲကျော်တန်တဲ့ Porsche 911 ကားကိုလည်းပိုင်ဆိုင် ထားပါသေးတယ်။
နံပါတ် ၅ ကတော့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Yoona ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ pandora, innisfree စတဲ့ brand တွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သူမဆီမှာလည်းဝမ်သိန်းပေါင်း၄၉ဝလောက်တန်တဲ့ Sciroco R line Volkswagen ကားတစ်စီးရှိပါတယ်။
နံပါတ် ၄ နေရာမှာတော့ Kwan Boa ကပိုင်ဆိုင်မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။သူမဆီမှာစတုရန်းမီတာ ၅၀၀၀ နီးပါးကျယ်ဝန်းတဲ့ အပန်းဖြေစံအိမ်တစ်လုံးလည်း Namyangju မှာပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
နံပါတ် ၃ ကတော့ အဆိုတော်အဖြစ်အောင်မြင်နေခဲ့ပြီး Moon Lovers, Hotel Del Luna စတဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ရင်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့ IU ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈သန်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉သောင်းကျော်တန်တဲ့ Porsche Cauenne ကားကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
နံပါတ် ၂ မှာတော့ 2NE1 အဖွဲ့ဝင် Dara က သူမရဲ့ကြွယ်ဝမှု ၃၂ သန်းနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။သူမမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းနီးပါးတန်ကြေးရှိတဲ့ Land Range Rover ကားလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမနဲ့ Volkswagen Beetle အဝါရောင်လေးဟာလည်း ဒေါ်လာ ၃ သောင်းခန့်ရှိပါတယ်။
နံပါတ် ၁ အချမ်းသာဆုံး နေရာကိုတော့ Lee Hyori ကနေရာယူထားပါတယ်။ Fin.K.L အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ 1998 မှာပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး အဆိုတော်အနေနဲ့ရော မင်းသမီးအနေနဲ့ပါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူမဟာ ၂၀၂၀ မှာတော့ ပိုင်ဆိုင်မှု ၃၂ သန်း ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ XC 90 Volvo ကားဟာဒေါ်လာ ၇ သောင်းခန့်တန်ဖိုးရှိပြီး သူမရဲ့ မန်နေဂျာကိုတောင် ဒေါ်လာ ၃ သောင်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့ ကားတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
Source: Shari Salendab
Next ကိုရီးယားက ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဆရာဝန်တွေ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်များ »
Previous « အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်တဲ့ Diet ပုံစံတွေ လုပ်ခဲ့ရတဲ့ Kpop idol ၈ ယောက်